China Insulated parallel groove clamp fekitori uye vagadziri | Chuan Ding
Model Number APG
Standard kana Nonstandard Standard
Chimiro Suspension Clamp
Product name pg simbi
Keywords pg simbi
Iyo insulating clip inogadzirwa neyakaomarara insulating organic synthetic zvinhu, ine kushoma elasticity uye kuoma kukuru. Inoshandiswa kugadzirisa waya uye kuita basa rekuzviparadzanisa nevamwe.
Iyo insulating clip inogadzirwa neyakaomarara insulating organic synthetic zvinhu, uye yakakamurwa kuita maviri mafomu: iyo imwe nzira uye yakatarisana. Muchidimbu sumo: iyo insulating clip inoshongedzerwa neiyo denderedzwa bayonet, iyo isinganyanye elastic uye yakaoma. Kudzvanya waya mubhayonet kunogona kubata Waya dzakasimba dzakamisikidzwa kuti dzizvitsaure. Isa simbi isina-directional insulation clamps pamharadzano yewaya dzakamira uye dzakachinjika. Iyo bayonet (perpendicular kune mumwe nemumwe) kumusoro uye kuzasi nzira dzeiyo insulation clamp inosunga waya dzakamira uye dzakachinjika; Batanidza mbabvu huru uye mbabvu inobatanidza. Kune tambo dzekugadzira pakati pemambure epamusoro neazasi, waya dzakavharwa dzinoshandiswa kuona kuti hapana zvishwe zvinogadzirwa pakati pemambure ewaya maviri. Waya yekuyambuka mapoinzi akasungwa ne organic synthetic zvinhu zvine simba rakakura uye kusimba kwakanaka. Kusunga waya kana welding kunorambidzwa zvachose.
Application: Insulation clamps inoshandiswa mune dzakasiyana siyana maindasitiri uye zvivakwa zvevagari. Nekuda kwekuenderana uye kwakamira kutaridzika kwevanobata makadhi, waya, simbi mbariro, nezvimwewo zvinogona kusungirirwa zviri nyore mukati mekadhi slots mukati, iyo inofambisa zvakanyanya waya yepasi, Nekumisikidzwa kwesimbi waya mesh, inongoda chete kusungirira iyo. vabati pawaya nesimbi mbariro kuti vapedze kusungirirana kwewaya uye simbi waya meshes, nekukurumidza uye nyore kuvaka waya uye simbi mbariro chimiro, uye kuita kuvakwa kwekongiri, iyo inovandudza zvakanyanya kushanda zvakanaka. .
Zvakapfuura: Puncture clamp jjc-1
Zvinotevera: New chemical anchor
Dhonza Plate Nxjg Clamp
Parallel yakarembera ndiro inopisa dip maratisirwa simba...
Quick Details >>> Model Number PS-7 10 12 16 30, PS-7 10 12 16 30 Conductor Material Stainless steel,steel Insulation Material hapana Jacket hapana Nhamba Yemaconductors 1 core Application 70-300 KN, Line Fittings Type parallel plate Material simbi isina tsvina, simbi Kushandiswa Kwepamusoro Mutsetse Zvishandiso Zvinoshandiswa netambo yekubatanidza fittings Slip Simba 70-300 KN Iyo yakafanana yakaturika ndiro...
Mashoko Anokurumidza >>> Nzvimbo Yekwakabva Hebei,China Model Number Parallel Groove Clamp Material Aluminium,Copper Color Silver,Customized Company Mugadziri Zita Groove Clamp Type Bimetallic Function Nyore Kuisa,Kushandisa Kwakachengeteka,Kuchipa Chigadzirwa tsananguro >>> Three-bolt aluminium parallel slo ...
Detail Information Product Tsananguro Zita: Suspension Clamps (Trunnion Type) Yakatemerwa Kutadza Kuremerwa: 40 60 70 Length: 180 220 Standard:: IEC 61284 Material: Malleable Iron Certificate: ISO9001/CE/ROHS High Chiedza: 70kn Trunnion Rudzi Rwakamira Suspension Clamp , 70kn Abc Suspension Clamp Suspension Clamps (Trunnion Type) Iyo yekumisikidza clamp yakagadzirirwa kuisirwa uye kumiswa kwetambo kana cond...